तपाईंको खाता स्थान जानकारी कसरी प्रबन्ध गर्ने? ➡️ ➡️ अनुयायीहरू ➡️ ➡️
12 सक्छ, 20210टिप्पणी 314
ट्विटर त्यो क्षणको सामाजिक नेटवर्क भएको छ, जहाँ लाखौं प्रयोगकर्ता र ट्वीटहरू हरेक दिन सक्रिय छन्। र यो यो छ कि प्रकाशनहरूको प्रवाह स्थिर र निरन्तर छ। व्यक्तित्व र सेलिब्रेटीहरू द्वारा बनाइएको ट्वीटबाट, समाचार नेटवर्कहरू द्वारा प्रकाशित गर्न, यस नेटवर्कको महत्त्व ट्रान्सेंडेन्टल हो।
जसरी तपाईं सयौं ट्विटहरू पोष्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईं प्लेटफर्ममा प्राप्त गर्न सक्नुहुने धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। ती मध्ये एउटा तपाईंको खाताको स्थानिय स्थान हो। तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ भनेर ट्वीटरलाई जानकारी दिएर, यसले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ, तपाईंलाई यो स्थानसँग सम्बन्धित सबै नै ट्विटहरू देखाउँदै।
तैपनि, ट्विटरले तपाईलाई सबै आवश्यक उपकरणहरू प्रदान गर्दछ तपाईको खातासँग सम्बन्धित सबै प्रकारको जानकारी प्रबन्ध गर्न, र स्थान जानकारी अपवाद छैन।
कसरी आफ्नो स्थान प्रबन्ध गर्ने?
यद्यपि स्थान डाटा रेजिष्ट्रेसनको समयमा स्वचालित रूपमा प्रदान गरिएको छ, तपाईं यो स्थान अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईंको प्रोफाइलमा केही परिवर्तन गर्नुहोस्।
ट्विटरमा लग इन गर्नुहोस्, तपाईंले गर्नुभएको प्रक्रिया मार्फत सामान्यतया
तपाईंले सेक्शन पत्ता लगाउनु पर्छ "सेटिंग्स र गोपनीयता" खाता मेनू भित्र। अनुप्रयोगमा तपाईले प्रोफाइल फोटो मार्फत प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ, जबकि, पीसीमा केवल "अधिक विकल्पहरू" क्लिक गर्नुहोस्।
पछि, प्रविष्ट गर्नुहोस् "गोपनीयता र सुरक्षा", जहाँ तपाईले सेक्शन "साझा डाटा र ट्विटर बाहिर गतिविधि" को भी खोज्नु पर्छ। यसको भित्र, "स्थान जानकारी" प्रविष्ट गर्नुहोस्।
यहाँ तपाई बदलीमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ, Sections खण्डहरू:
"तपाईं जहाँ हुनु भएको स्थान अनुसार अनुकूलित गर्नुहोस्": यस सेक्सनलाई सक्रिय बनाएर, ट्विटरले तपाईंलाई यो थाहा दिन्छ कि जहाँ तपाईं दर्ता गर्नुहुन्छ र यस समयमा तपाईंको स्थान जानकारी तपाईंलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जानकारी देखाउन प्रयोग गरिन्छ, त्यसैले यो तपाईं आफ्नो ट्विटर अनुभव निजीकृत गर्न को लागी अनुमति दिनेछ।
"तपाईं जानु भएको स्थानहरू हेर्नुहोस्": यो सेक्सन प्रविष्ट गर्न, तपाईले पहिले आफ्नो खाता पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। पहुँच गर्दा, तपाईले आफ्नो खातामा जडित भएका ठाउँहरूको सूची पाउनुहुनेछ। तलतिर तपाईं विकल्प फेला पार्नुहुनेछ "हटाउनुहोस्" रातो हाइलाइट गरियो, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तिनीहरूलाई मेटाउनको लागि।
"तपाइँको ट्वीटमा स्थान जानकारी थप्नुहोस्": यस विकल्पलाई सक्रिय गर्नाले ट्विटरलाई तपाईंको ट्विटहरूको भौगोलिक स्थान थाहा पाउन अनुमति दिनेछ। तपाईले विकल्प पनि पाउनुहुनेछ "तपाईंको ट्वीटमा समावेश सबै स्थान जानकारी मेट्नुहोस्।"
"ब्राउज सेटिंग्स": यसको भित्र तपाईं पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं देखाउन चाहानुहुन्छ "यस स्थान को सामग्री", ताकि तपाई आफ्नो स्थान वरिपर के भइरहेको छ भनेर सजग हुन सक्नुहुन्छ।
तपाईले तपाईको खातामा देखिने रुझानहरु पनि अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको स्थान र खातामा आधारित छ पछ्याउन।
अतिरिक्त को मतलब स्थान परिवर्तन गर्नु हो
यो जानकारी परिवर्तन गर्न एक चाखलाग्दो चाल अनुप्रयोगहरूको माध्यमबाट हो जुन तपाईंको मोबाईलको जीपीएस परिवर्तन गर्दछ। यी अनुप्रयोग स्टोरमा फेला पार्न सकिन्छ र एकचोटि स्थापना भएपछि, तपाईं आफ्नो खाताको भौगोलिक स्थान चयन गर्न सक्नुहुनेछ, जसले तपाईंको टाइमलाइनमा प्रवृत्ति र ट्वीट्सको अनुमानलाई संशोधित गर्नेछ।
1 कसरी आफ्नो स्थान प्रबन्ध गर्ने?
2 प्रक्रिया अर्को हो:
3 अतिरिक्त को मतलब स्थान परिवर्तन गर्नु हो
यूट्यूबबाट कसरी लामो भिडियोहरू डाउनलोड गर्ने?